I-HONGSBELT ikwadume kakhulu kwishishini lokutya okutyiwayo, sihlala sihambisa izisombululo zebhanti zokuhambisa ezihlakaniphile kwishishini lokutya le-Snack eliphucula ukusebenza kakuhle kwindawo nganye yesityalo. Izisombululo zeBhanti yaseHong kudala zisetyenziswa kwi-application yemveli...
Iibhanti zokuhambisa ze-HONGSBELT zisetyenziswa kakhulu kwishishini lokubhaka, ngakumbi kumgca wokupholisa kwi-spiral conveyor. Ibhanti yeplastiki eyimodyuli i-HS-500B sisisombululo sakho esifanelekileyo sokuhambisa okujikelezayo. Amalungu eQela leHong's Belt Bakery abandakanya iingcali zokubhaka ezivela kubunjineli, inkonzo yabathengi...
I-HONGSBELT esetyenziswa kwishishini lobisi. Sinikezela ngenkxaso kunye nobuchule kuwo onke amacandelo obisi, kubandakanya ibhotolo, itshizi, i-ayisikrimu, ubisi, iyogathi kunye nekhrim. Izinto eziluncedo zibandakanya: Ukunyuswa kwemveliso, Ukugcinwa okucuthiweyo, ukuguquguquka kokuphathwa kwemveliso, Ukuphuculwa kokutya...
I-HONGSBELT zombini ibhanti yeplastiki eyimodyuli kunye nebhanti yamatyathanga zonke zisetyenziswa ngokubanzi kushishino lwesiselo. I-Shenzhen HONGSBELT, inamandla okuvelisa, inkqubo yemveliso etyebileyo kunye nexabiso eligqibeleleyo, iye yamkelwa abathengi kwihlabathi liphela ukusukela oko ilinyathelo lokuqala kwisiselo...
Yamkela i-HONGSBELT® yokuthutha iimveliso zezolimo. Ngenxa yeemveliso zezolimo ziya kuqhoboshela isanti nomhlaba omninzi; i-grit ilula ukugqoka kunye nokusika ubuso bebhanti. Ubomi be-HONGSBELT® buya kuba ngamaxesha e-10 kune-PVC b...
Izixhobo zesikhokelo se-backbend (HDM) zinokuqhotyoshelwa kwiibhanti zemodyuli ze-HONGSBELT®. Banokufaka isicelo kwisihambisi esityekeleyo ekufuneka sikuphephe ukuthatha iileyili zokubamba macala omabini. Baxhoma ezantsi ibhanti ngengoma elula ukuya ku...
Lo mzekelo usetyenziswa kumacala omabini abathuthi abakhethiweyo kunye nesikali seqonga le-elektroniki kumzi-mveliso wokulungisa ukutya, njengendawo yokuthutha isithinteli emva kokuhlelwa kobunzima. Lo mhambisi wamkela ibhanti lemodyuli ye-HONGSBELT® HS-400A kwaye isebenzisa uphawu lwayo lwe-mini...
I-HONGSBELT® ibhanti yokuhambisa iplastiki yemodyuli isetyenziswa kakhulu kwimveliso yemveliso yenyama eveliswe ukuthunyelwa ngaphandle. Yamkela amabhanti emodyuli e-HONGSBELT® kuyo yonke inkqubo yokuthutha. Iimveliso zechungechunge ze-HONGSBELT® zigqithise isatifikethi se-FDA. Uyilo olulula m...